Location: Mbido » Ịdee » Industrylọ Ọrụ Ọbịa » Akụkọ ụlọ ọrụ nkwari akụ steeti 2022
23 min gụọ
Dị ka 2020 bụ afọ mmiri maka ụlọ ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, otú ahụ ka 2021. Ọ bụ ezie na ọrịa ahụ na-aga n'ihu, ụlọ ọrụ ahụ malitere ịmaliteghachi, nke na-ekesa ọgwụ mgbochi mba na nchekwube ndị ahịa. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ American Hotel and Lodging Association mbụ State of the Hotel Industry akụkọ, nke ewepụtara na Jenụarị 2022, gosipụtara otú ụlọ ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ si na-agbanwe agbanwe ma buru amụma ihe na-echere ndị nwe ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ndị ọrụ, ndị ọrụ na ndị njem.
Otu afọ ka e mesịrị, ọgwụ mgbochi dịịrị onye ọ bụla nọ na United States dị afọ ise na karịa, yana 63% nke ndị bi na United States agbaala ọgwụ mgbochi.
N'agbanyeghị nke ahụ, ikpe na-arị elu, dịka a na-eche maka ụdị nje virus ọhụrụ na ntiwapụ.
Nke bụ eziokwu bụ na COVID-19 na-aga n'ihu na-emetụta ndụ kwa ụbọchị - na mkpokọta ọnụ ga-abụ ụkpụrụ maka ọdịnihu a na-ahụ anya. Nje virus a na-adabere na nsonye nke akụkọ ụlọ ọrụ steeti nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke afọ a, gụnyere
amụma gbasara nnukwu akụ na ụba yana mgbanwe a na-atụ anya na ndị ahịa na mmetụta azụmaahịa
Usoro mgbake na-esote ga-abụ nke na-ezighi ezi, nwere ike ịghagharị. Mana otu ihe ka doro anya: 2022 bụ afọ onye njem “ọhụrụ”.
Njem ihe ụtọ—ya bụ, ịgwakọta azụmahịa na njem ntụrụndụ—agbawala n'oge ọrịa na-efe efe, na-anọchi anya mgbanwe dị ukwuu na omume na omume ndị ahịa metụtara njem. Nke a, n'aka nke ya, ga-emetụta ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị ka ụlọ ọrụ na-azaghachi iji gboo mkpa na atụmanya nke ndị ọbịa ya.
Ihe ngosi niile bụ na ụlọ ọrụ nkwari akụ ga-aga n'ihu na-aga n'ihu na mgbake na 2022, mana mgbake ahụ zuru oke ka dị ọtụtụ afọ. Dị ka
na nyocha maka AHLA site na Oxford Economics, a na-atụ anya ka a na-achọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ego a ga-enweta n'ime ụlọ na ọ fọrọ nke nta ka ọ laghachi azụ na ọkwa 2019 na
Atụmatụ ego ga-enweta n'ime ụlọ ga-eru ijeri $168, n'ime 1% nke ọnụ ọgụgụ 2019 yana
mmụba nke 19% ma e jiri ya tụnyere 2021. A na-atụ anya na ọnụnọ obibi ga-akụ 63.4%, na-eru nso na ọnụego 66.0% enwetara na 2019 ma dị elu karịa 44% na 57.6% ruru na 2020 na 2021, n'otu n'otu.
Nlaghachi nke ego a na-enweta n'ime ụlọ bụ n'ezie ozi ọma maka ndị na-azụ ahịa, ma ọ na-eme ya
agwala akụkọ ahụ dum.
Ọbụlagodi na nlọghachi n'ịrụ ọrụ ego n'ime ụlọ tupu ọrịa a na-ebute ọrịa, ọnụ ọgụgụ ndị a anaghị ekwupụta maka atụmatụ agbakwunyere ihe karịrị ijeri $48 ijeri na mmefu tupu oria ojoo a na-emefu maka nri na ihe ọṅụṅụ, oghere nzukọ, na ọrụ enyemaka ndị ọzọ - isi mmalite ego a na-atụ anya na ọ ga-adalata nke ukwuu. na nloghachi ya. Ndị ọkachamara n'ụlọ ọrụ na-eme atụmatụ na naanị ihe karịrị ọkara nke nzukọ na mmemme ga-alaghachi na 5, 2022 na-enwe mmetụta ọjọọ nke ụdị Omicron ka ga-ekpebi.
Na mgbakwunye, ụlọ oriri na ọṅụṅụ n'ofe mba ahụ na-aga n'ihu na-egwupụta n'ime afọ abụọ ebe ha tụfuru mkpokọta $ 111.8 na ego ha nwetara n'ime ụlọ naanị.7 mgbake akụkụ na 2022 agaghị ezuru ikwe ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ kwụọ ụgwọ ndị na-agbazinye ego kpamkpam, na-akwụghachi ụgwọ zuru ezu. ndị ọrụ, tinye ego n'ịkwalite ihe onwunwe na-egbu oge, ma mejupụta ebe nchekwa ego azụmahịa.
A ka nwere nnukwu ifufe isi na ndị nwere ike ịkpaghasị maka mgbake zuru oke. Ọ bụ ezie na njem ntụrụndụ nwere ike ịlaghachi n'ụzọ zuru ezu na 2022, a na-atụ anya njem azụmahịa ga-adịgide nke ukwuu n'okpuru ọkwa ọrịa mbụ. Mmetụta mmetụta obere oge Omicron nwere na ụlọ ọrụ nkwari akụ ka amabeghị.
Ọzọkwa, ọdịiche dị n'ọdịnihu ga-emepụta mgbanwe na nlọghachi nke ntụrụndụ na njem azụmahịa yana iri ijeri dollar jikọtara na nzukọ na mmefu mmemme. Dị ka Cvent's November 2021 Group Business Insight Report si kwuo, otu ụzọ n'ụzọ anọ nke nzukọ a na-enweta bụ ngwakọ, na 72% nke ndị na-eme atụmatụ nzukọ nyocha na-ewepụta ihe omume site na ihe mmadụ.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ ga-aga n'ihu na-alụ ọgụ maka ụkọ ndị ọrụ, na-ebelata ikike ha na-ebuli ego ha nwetara site n'aka ndị njem nwere ike. Nrụgide ịrị elu pụtara na ọ bụ ezie na mgbake ọnụ nwere ike ime na mbụ, ezigbo mgbake maka ụlọ ọrụ ahụ ga-ewe ruo 2025, dị ka STR na Tourism Economics si kwuo.
Ọ bụ ezie na ezigbo mgbake na ọkwa tupu ọrịa ọrịa ka dị ọtụtụ afọ, ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-aghọta, na-akwado ma na-azaghachi mkpa nke onye njem "ọhụrụ", ka ọdịnihu na-achọ ụlọ ọrụ dị mkpa maka ndị America. aku na uba.
Achọpụtara na nlele
Echiche njem maka 2022 na-aga nke ọma, mana ọ na-aga n'ihu
A na-atụ anya mgbanwe mgbanwe, yana afọ mgbake zuru oke. Ọnụọgụgụ ọnụ ụlọ
na ego ha ga-enweta n'ime ụlọ ga-eru nso ọkwa 2019 na 2022, mana nke ahụ
Echiche maka ego ntinye aka na-enwechaghị nchekwube. A na-atụ anya njem azụmahịa
ka ọ dị ala karịa 20% maka ọtụtụ afọ, naanị 58% nke
nzukọ na ihe omume na-atụ anya ịlaghachi, na zuru ọjọọ mmetụta nke
Amabeghị Omicron. Ịrụ ọrụ n'isi ga-apụta ọkwa ọrụ
na njedebe afọ ga-agbada 7% ma e jiri ya tụnyere 2019.
Ndị njem "ọhụrụ" na-atụ anya ihe dị iche iche site na ụdị ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ndị ahịa'
mkpali, omume, na atụmanya niile gbanwere n'oge ọrịa ọjọọ -
na-agbanwe nke ukwuu ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ si arụ ọrụ iji mee ka afọ ju ndị ọbịa ha, bụ ndị
na-esiwanye ike ịbụ ndị njem ntụrụndụ ma ọ bụ ndị njem ntụrụndụ ma ọ bụ ndị nkwagharị dijitalụ. Dị ka a
N'ihi ya, teknụzụ ga-adịkwa mkpa karịa n'ime ihe ịga nke ọma ihe onwunwe.
Idowe na ịdọta talent kachasị elu pụtara igosipụta ụzọ ọrụ,
ọ bụghị naanị ọrụ. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere ike wulite ndị ọrụ maka ọdịnihu site na
na-ekwurịta obosara nke ohere ọrụ dị na
ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ugbu a na ndị na-atụ anya ya.
Atụmatụ nkwado ga-arụ ọrụ na-abawanye uru maka
ụlọ ọrụ ahụ. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-eme nkwa maka ebumnuche nkwado na
mmemme abụghị naanị na-eju afọ ọbịa na-atụ anya, ha na-eme
mgbanwe ndị dị mma maka azụmahịa ahụ.
Mmemme iguzosi ike n'ihe ga-amalite na nzaghachi maka njem njem ọhụrụ.
Site na njem azụmahịa dị elu dị elu, mmemme iguzosi ike n'ihe ọdịnala mba
ogologo uche. Mmemme iguzosi ike n'ihe kacha dị irè ga-enyekwu ihe
ụgwọ ọrụ ahaziri ahazi nke na-egbo mkpa nke ndị njem azụmahịa mgbe ụfọdụ
na ndị njem ntụrụndụ kwa.
Njikere njem na-aga nke ọma, mana ọ ka na-agba ọsọ.
Mgbanwe nke njem n'oge ọrịa na-efe efe na-eme ka amụma ịdị njikere njem dị oke egwu - ma sie ike karịa - karịa mgbe ọ bụla. Ndị mmadụ chọrọ ịga njem? A ga-ebelata atụmatụ njem ha site n'eziokwu akụ na ụba sara mbara? Ihe mgbochi ime njem n'ụlọ ma ọ bụ n'ebe ha na-aga ọ ga-amanye ha ịgbanwe atụmatụ ha?
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ịdị njikere ime njem na-egosi otú ndị mmadụ si dị njikere ime njem. Iji ghọta ịdị njikere njem taa, anyị tụgharịrị gaa na Accenture Travel Readiness Index, ụzọ ọhụrụ e si enyocha ebumnobi ime njem dabara adaba na ọnọdụ njem nke taa. Kwa ọnwa, Index nke mba dị iche iche na-enyocha ma njem na ihe ndị na-abụghị njem na-emetụta ebumnuche gụnyere ọnọdụ ahụike obodo metụtara COVID-19, ihe gbasara akụ na ụba nwa oge, ọchịchọ njem, na ọnọdụ ngagharị. A na-atụnye ihe ngosi ndị a iji gosipụta oke mmetụta ha nwere na njikere njem.
Njikere bụ ebumnobi na-akpụ akpụ
A na-emelite Index kwa ọnwa n'ihi na ịdị njikere njem abụghị nke zuru oke. Nke a ga-abụ eziokwu ma ọ bụrụhaala na ọrịa anaghị achịkwa nke ọma yana ebili mmiri ọhụrụ, ụdị dị iche iche, na nzaghachi ahụike gọọmentị na ọha na-eme ka ntụkwasị obi na ntụkwasị obi ndị mmadụ nwere na njem. Dịka ọmụmaatụ, tụlee otu esi etinye mmachi njem ngwa ngwa na mba dị iche iche n'ụwa mgbe ụdị Omicron pụtara na njedebe 2021. Òtù Na-ahụ Maka Ahụ Ike Ụwa họpụtara ya dị iche iche nke nchegbu na Nọvemba 26, 2021, na na December 2, 2021, President. Biden kwuputara usoro ọhụrụ maka njem mba ụwa.
Usoro ịdị njikere njem na ọkara nke abụọ nke 2021 na-akụzi ihe ị ga-eme
na-atụ anya na 2022: ume n'akpa uwe yana nkwụsị na mmalite kpatara ya
otu ma ọ bụ karịa njem egosi.
Site n'ọchịchọ a na-achọsi ike na ọtụtụ ndị na-ahọrọ ịgagharị ma ọ bụ laghachi na ndụ kwa ụbọchị na nje a, ịdị njikere njem hụrụ mmụba 5% na Septemba 2021 ma e jiri ya tụnyere August 2021 n'ụwa niile. Agbanyeghị, usoro ịdị njikere ka na-agbanwe agbanwe rue ngwụcha afọ. Nọvemba 2021 nwetara mbelata 2% site na ọnwa gara aga n'ihi ntiwapụ na mmachi njem ọhụrụ. Njikere zuru oke na
Nọvemba 2021 bụ 23% n'okpuru ntọala 2019.
Na Septemba 2021, ahịa US hụrụ mbelata 3% karịa Ọgọst 2021 n'ihi mmachi siri ike maka ndị njem mba ofesi. Ụgbọ okporo ígwè na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-agbaso ụkpụrụ akụkọ ihe mere eme, na-ada mgbe okpomọkụ siri ike ma na-egosi ike na ọdịda. Nlebanya sitere na nchịkwa nchekwa ụgbọ njem (TSA) kacha elu na July na ihe karịrị nde ndị njem ụgbọ elu 2, ụlọ oriri na ọṅụṅụ ruru 71% ndị bi.
Ka ọ na-erule na Nọvemba, mbelata mmachibido njem njem Europe na United States butere mmụba dị ukwuu na ikike ụgbọ elu, na-egosi mmụba nke ọchịchọ.
12 Obodo ahụ nọgidere na-emepe njem ka oge ezumike rutere. N'ezie, izu Ekele 2021 bụ onye na-emebi ihe maka ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ US — ọnụ ọgụgụ ndị bi na 53%, yana RevPAR dị 20% karịa n'otu oge ahụ na 2019.
Ọrịa na-efe efe zuru ụwa ọnụ nwere mmetụta mpaghara
Ọ bụghị naanị njikere ndị njem n'ụlọ ka ụlọ ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ga-aza ajụjụ dị ka onye ọkwọ ụgbọ ala nke chọrọ na 2022. Ndị njem mba ụwa bụkwa ndị na-ege ntị dị mkpa.
Ndị njem mba ụwa ruru 15% nke ngụkọta mmefu njem US na 2019 tupu ọrịa a amalite, mana naanị 6% na 2020.15 Na 2022, World Travel & Tourism Council na-atụpụta mmụba 228% na mmefu ego na United States site na ndị njem mba ofesi ma e jiri ya tụnyere ya. 2021.
Ịkwado maka ịwa ahụ a nwere ike pụtara ịnakwere na echiche gbasara njem na ịdị njikere njem ga-adịgasị iche site na mba ruo n'obodo n'ihi na ọgba aghara a zuru ụwa ọnụ agbasawo nke ukwuu na mmetụta ya. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị na-eche maka ịdị njikere site na oghere nke ahụmahụ ọrịa ọrịa ndị mmadụ na-enwebu-ma dị ugbu a-kachasị mma iji chọpụta ma ọ dị ha mkpa iwebata usoro ahụike na nchekwa ndị ọzọ iji rịọ ndị njem a.
Nke a bụ ihe Index na-ekpughe banyere ịdị njikere njem n'ihe a na-atụ anya na ọ ga-abụ nnukwu ahịa inbound maka United States.
Ihe na-ejighị n'aka nke fọdụrụ banyere ọdịdị nke Omicron variant n'oge a na-ebipụta na-egosi otú o si sie ike ịkọ ịdị njikere njem na 2022. Ihe anyị nwere ike iche bụ na ihe mgbochi ndị a na-enye maka ịlụso ụdị Omicron ọgụ nwere ike ịnọ ruo March. Kedu ihe ọzọ, ọtụtụ ihe dị mkpụmkpụ nwere ike imetụta ịdị njikere njem nke ọma ma ọ bụ na-adịghị mma, na n'ozuzu, anyị anaghị atụ anya na Index ga-egosi akara mgbake na-agbanwe agbanwe ruo etiti 2022 na mbụ.
elele ụlọ ọbịa 2022
Njikere njem ga-agwa ka ụlọ ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ si arụ ọrụ na mpaghara dị oke egwu gụnyere ọnụnọ, ego ha nwetara n'ọnụ ụlọ, ọrụ, na agụụ ndị ahịa. Ọ bụ ezie na 2022 agaghị ahụ nlọghachi zuru ezu na 2019, echiche ahụ siri ike karịa ka ọ dị na 2021.
A na-atụ anya na ọnụ ụlọ nkwari akụ ga-aga n'ihu na-arị elu site na mbelata akụkọ ihe mere eme nke 2020, na-akwụ ụgwọ 63.4% maka afọ, ka STR na Tourism Economics si kwuo.
N'afọ 2019, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ 60,000 nke mba ahụ nwere nkezi ọnụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ 66%, na-ere ụlọ ijeri 1.3. Ọrịa ọjọọ ahụ butere ọnụnọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ US na akụkọ ihe mere eme dị ala nke 24.5% na Eprel 2020, ebe obibi kwa afọ dara na 44% maka afọ. A na-eme atụmatụ ọnụnọ ụlọ nkwari akụ maka 2021 na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 58% - isi ise zuru oke karịa nke a tụrụ anya n'oge a n'afọ gara aga (ntụgharị 52.5%), mana ọ ka na-agbadata ihe karịrị pasent asatọ site na ọkwa oria ojoo.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-arụ ọrụ zuru oke na-amalite na-agbaji ọbụna na 50%, nke a anaghị akwụ ụgwọ maka nnyefe ego na ụgwọ ndị ọzọ. Dị ka nke a, ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ nọrọ afọ abụọ gara aga nke ọma n'okpuru nkwụsịtụ-ọbụlagodi ha, na-adabere na nchekwa ego iji kpuchie mmefu. Yabụ ọbụlagodi na nlọghachi na nso ebe ọrịa butere ọrịa na 2022, ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere ụzọ ha ga-esi gaa tupu mgbake n'ezie. Atụmatụ ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya ga-aga n'ihu na-arị elu na 2022, na-agbago 63.4% maka afọ.
Ọgụgụ 1 - Ọnụ ụlọ nkwari akụ site n'afọ
Ọnụ ego ụlọ
Mgbe ọ dara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% na 2020, ego ha ga-enweta n'ọnụ ụlọ ụlọ nkwari akụ ga-agaghachi azụ
2019 ọkwa nke afọ a. Mmefu enyemaka na-abụghị ọnụ ụlọ ga-aga n'ihu na-ada azụ.
Tupu oria ojoo a, ọnụ ụlọ ndị ọbịa dị nde 5.4 nke ụlọ ọrụ na-emepụta ihe karịrị ijeri $169 na ego ọnụ ụlọ kwa afọ, nke na-agụnyeghị iri ijeri ijeri ndị ọzọ a na-enweta site na ịgbazite ụlọ nzukọ na isi mmalite ndị ọzọ na-enweta ego.
N'afọ 2020, ego ha nwetara n'ọnụ ụlọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ dara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% n'ofe United States ruo nanị ijeri $85.7, wee maliteghachi ruo ijeri $141.6 na 2021. Nke a pụtara na n'ime afọ abụọ ahụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ tụfuru mkpokọta $111.8 ijeri n'ime ụlọ naanị. Atumatu ego ga-enweta n'ime ụlọ ga-eru ijeri $168.4 n'afọ a, ma ọ bụ n'ime otu pasentị nke ọkwa 2019.
Echiche maka ego ntinye aka sitere na nzukọ, mmemme, na nri na ihe ọṅụṅụ - nke a na-eche na ijeri $ 48 kwa afọ tupu ọrịa na-efe efe - edochaghị anya. Ọrụ Knowland nke naanị 58.3% nke nzukọ na mmemme ga-alaghachi na 2022, yana 86.9% laghachi azụ na 2023, nke pụtara na ọtụtụ n'ime ego a ga-enweta ga-aga n'ihu na-efu.
Ọnụọgụ 2 - Ọnụ ego ụlọ nkwari akụ site na afọ
Ka ọ na-erule njedebe nke 2022, a na-atụ anya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ga-ewe nde mmadụ 2.19 - 93% nke
ọkwa ha tupu ọrịa ọrịa.
N'afọ 2019, ụlọ oriri na ọṅụṅụ US na-ewe ihe karịrị nde mmadụ 2.3 ọrụ ozugbo. Mgbe mbelata dị ukwuu nke 2020 gasịrị, ụlọ oriri na ọṅụṅụ gwụchara 2021 na 77% nke ọkwa ọrụ 2019 ha.
Ọ bụ ezie na a na-atụ anya uto siri ike n'afọ na-abịa, a na-atụ anya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ga-akwụsị 2022 na ndị ọrụ nde 2.19 - gbadaa 166,000 ma ọ bụ 7% tụnyere 2019, na-egosipụta isi na-aga n'ihu na ahịa ọrụ.
Ọgụgụ 3 - Ọrụ site n'afọ
Agụụ ndị ahịa
A na-achọsi ike maka njem—karịsịa n'etiti ndị na-eto eto.
Mgbe ọnwa nke iche na mgbochi njem njem n'oge ọrịa a gasịrị, ọtụtụ ndị America chọsiri ike ime njem ọzọ na 2021; A na-atụ anya na ọchịchọ ahụ ga-aga n'ihu n'afọ a. Dị ka Morning Consult's State of Travel and Hospitality Q4 Report si kwuo, 64% nke ndị okenye US na-ekwu na ha emewo njem n'ime afọ gara aga, ndị na-eto eto na ndị na-azụ ahịa dị elu na-ebute ụzọ.
Akụkọ ahụ chọpụtakwara na n'ime mba asatọ a nyochara, ndị America so na ndị kacha chọsie ike ịbanye n'okporo ụzọ ahụ, ebe 50% na-atụ anya ịga njem ntụrụndụ n'ime ọnwa isii na-abịa.
Dabere na Accenture's 2021 US Holiday Shopping Survey, 40% nke ndị ahịa US na-eme atụmatụ ilekwasị anya na ịchekwa maka ezumike ma ọ bụ njem n'ọdịniihu. Ịchekwa maka njem bụ ihe kacha mkpa nke ndị na-azụ ahịa na-ebute ụzọ ego mgbe ha kwụchara ụgwọ (Foto
43% zuru ezu na-atụ anya njem dị ukwuu ma ọ bụ karịa n'ime ọnwa isii na-esote karịa ka ha mere ma e jiri ya tụnyere otu ọnwa isii na 2019.
Ọgụgụ 4 – Ihe kacha mkpa gbasara ego nke ndị ahịa US nke 5
Gen Z na Millennials nwere mmasị karịsịa ịgagharị ọzọ, n'agbanyeghị na ha ka chọrọ mmesi obi ike iji mee nke ahụ. Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke otu a kwenyere na ozi na-abịa n'oge, njikwa erugharị njem ka mma, na ikike ịde akwụkwọ na ịkwado ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa site na ngwa ụlọ ọrụ njem ga-eme ka ha mee njem ọzọ.
Accenture Airline Business Njem azụmahịa Covid-19 Employment Health Ile ọbịa Hotel Narị Afọ Iri Organization Mkpu inye ekele Tourism Njikwa Nchebe Securitygbọ njem United States World Health Organization
Minnesota chọrọ ịbụ ebe ị na-aga maka ụbọchị ezumike mba
Qatar Airways na ụgbọ elu Malaysia: Ọhụrụ na-esote…